फोटो फिचर Archives - ejhajhalko.com
पोखरा ,२३ असार । पर्यटकीय शहर पोखरा प्रवेशको मुख्यद्वार विजयपुर खोलामाथि अस्थायीरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको डाइभर्सन बाढीले बगाएको छ । पृथ्वीराजमार्गको पोखरा महानगरपालिका वडा नं १४ चाउथे र वडा नं २६ विजयपुर जोड्ने विजयपुर खोलामाथि एक दशकअघि निर्माण गरिएको पक्की मोटरेवल पुलको स्टिल बीम चर्किँदा ठूला भार क्षमताका या...
ललितपुर, १०जेठ । गीतकार अग्निप्रसाद केदेम लिम्बुको गीति एल्बम ‘सिटिजन यूके’ सार्वजनिक गरिएको छ । ललितपुरमा रहेको रेडियो बिएफबीएसमा शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच गीतकार डा. कृष्णहरि बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा एल्बम ‘सिटिजन यूके’लाई सार्वजनिक गरिएको हो । रेडियो बिएफबीएसमा लाइभ कार्यक्रबीच प्रमुख अतिथि डा. कृष्णहरि ...
काठमाडौं, ७ जेष्ठ । चेक बाउन्स मुद्दामा मोडल खुश्बु ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन महिना कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले मंगलबार खुश्बुलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको हो। सप्तरीका गोपालबहादुर कट्वालले आफूलाई दिएको ३६ लाख रुपै...
गाँउपालिकाको कार्यालयमा राखिएको बम नेपाली सेनाद्धारा डिस्पोज
बझाङ,७ जेठ । जिल्लाको छविसपाथीभेरा गाँउपालिकाको कार्यालयको मूल ढोकामा राखिएको बाल्टिन बम निष्क्रिय पारेको छ । मंगलबार गाँउपालिकाको मुल गेटमा अज्ञात समुहले बाल्टिन बम राखेको फेला परेपछि जिल्ला बाट नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली घटना स्थलतर्फ गएका थिए । सोमबार राती नै कुनै अज्ञात समुहले गाँउपालिकाको कार्यालयको...
एजेन्सी । सहारा मरुभूमि संसारको सबै भन्दा गर्मी ठाउँ मध्य एक हो जहाँ हामी हिम पात भएको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । तर यस ठाउँमा बिगत दुइ बर्ष देखी नियमित हिम्पात भएको छ । आइतवार,अल्जीरियामा रहेको ‘अइन सेफ्रा’ मरुभुमी जुन “गेटवे टू सहारा”को रूप मा चिनिन्छ, त्यहाँ १५ इन्च सम्मको हिम पत भएको अनुभब गरिएको छ । ...
बाहिरियो करिना कपुरको नयाँ फोटोसुट, छोरा जन्माएपछि पनि यति हट !
मुम्बइ । बलिउड हिरोइन करिना कपुरले हालै एक फेशन म्यागजिनका लागि फोटोसुट गरेकी छिन् । म्यागजिनको अनवरी अंकको कभरका लागि उनले फोटोसुट गराएकी हुन् । म्यागजिनको लागि खिचिएका सबै फोटोमा करिना निकै हट देखिएकी छिन् । हेर्नुहोस् फोटोहरु – ...
मायाँदेवी मन्दिरको आँगनमा…
लुम्बिनी स्थित मायाँदेवी मन्दिर अगाडिको पोखरीबाट बाहिर निस्किएर घाम तप्दै गरेको कछुवा। जाडो बढेपछि दिनको समयमा कछुवा घाम ताप्न पोखरी बाहिर निस्कन्छन्। तस्बिरः डिसी नेपाल ...
प्रचण्डको स-परिवार नारायणी किनारमा ‘इभिनिङ वाक’मा
काठमाडौँ । राजधानीमा सरकार बनाउने रसाक्सी चलिरहेको बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स-परिवार चितवन पुगेका छन् । चितवन पुगे लगतै प्रचण्ड नारायणी किनारमा सन्धाकालिन यात्रामा निस्किएका छन् । इभिनिङ वाकमा हिडेका प्रचण्डले नारायणीको तिरमा आफ्ना बाल्यकालका दिन सम्झिन्दै भने ‘हामी पहिले यहीनेर ...
एनअारएनए नर्वेद्वारा धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनलाई सहयोग
नर्वे । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनअारएनए) नर्वेले एकीकृत नमूना वस्ती निर्माण गरिरहेको धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनलार्इ सहयोग गरेको छ । कल्याणकारी कार्यका लागि संकलन गरेको एक लाख ४० हजार ७८० रूपैयाँ एनअारएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष भवन भट्ट र एनसीसी बेल्जियमका उपाध्यक्ष योगिता थापाले संयुक्त रुपमा फाउण्ड...
अमेरिकामा राजेश पायललाई सम्मान, नोभेम्बर ५ मा ‘राइ इज किङ डे’ मनाइने
केहि समययता गायक राजेश पायल राई अमेरिकामा सांगीतिक यात्रामा छन् । यसै मेसोमा उनले अमेरिकाको रोचेस्टर शहरमा विशेष सम्मान पाएको भन्दै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाको रोचेस्टर सिटीमा उनलाई सम्मान गरिएको छ, जसलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली कलाकारले पाएको अहिलेसम्मकै ठूलो सम्मान’ भनिएको छ । रा...
यी हुन् बर्षका उत्कृष्ट ५ फिल्म, कसले जित्यो दर्शकको मन ?
नेपाली चलचित्रको ब्यापारलाई हेर्ने हो भने बर्ष २०७३ को बारेमा निर्माताहरुले गुनासो गर्ने ठाउँ खासै देखिएको छैन । दर्शकको मन छुने खालका चलचित्र बनाउन सकेको खण्डमा व्यापार कमजोर बन्दैन भन्ने उदाहरण केहि चलचित्रले दिए । यो बर्ष १ करोड माथिको ग्रस कलेक्शन गर्ने चलचित्रको संख्या पनि कमजोर छैन । बर्षमा बनेका ७ दर्जन बढी च...
मस्ती टकः ‘अशिष्मा केटा जस्ती छिन्ः आमेष, म केटी नै हुँः अशिष्मा’
नायकद्धय आमेष भण्डारी र सलोन बस्नेत चलचित्रको छायांकनको क्रममा निकै जिस्किन्थे । विशेषगरि, सलोन र आमेषले नायिका अशिष्मा नकर्मीलाई हैरान नै बनाउथ्य । उनीहरुले अशिष्मालाई दुई अर्थ लाग्ने शब्द बोलेर हैरान बनाएका रहेछन् । चलचित्र ‘मेला’को प्रचारमा सलोन बस्नेत नहिडेपनि नायिका अशिष्मा र नायक आमेषले राम्रो साथ दिए । अनलाइन...